Indlela Yokuziva NjengoPro kwiKhasino (Nokuba iliLungelo lakho lokuQala) – CYMRU
No Comments on Indlela Yokuziva NjengoPro kwiKhasino (Nokuba iliLungelo lakho lokuQala)
Kukho amaxesha amaninzi kuphela onokujonga iifilimu zakho ozithandayo zokungcakaza ngaphambi kokuba umnqweno wokungcakaza ube mkhulu kakhulu ukuba ungawuthwala. Ke, ekugqibeleni uthatha isigqibo sokuphula isitywina kunye nentloko yekhasino yakho oyikhethileyo. Inye kuphela ingxaki: Awunolwazi ngokupheleleyo malunga nokuba injani iklasikhi nokuba uyintoni.
Umzuzu wokungena ekhasino okokuqala ngamava amangalisayo. Umozulu uphela unokubangela uxinzelelo lwabagembuli bexesha lokuqala ngenxa ye-plethora yemidlalo uninzi lweekhasino. Ukuba uyandithanda, ungaziva unexhala malunga nento ekufuneka uyenzile ekhompyuter xa ungena kwiminyango yangaphambili.
Ukuziva unexhala kuyaqondakala kwaye kuyinto exhaphakileyo phakathi kwabona bafundi babatsha. Ukuqinisekisa ukuba ulungiselele uhambo lwakho lokuqala lokungcakaza, kubalulekile ukugcina izinto ezimbalwa engqondweni. Nazi iingcebiso ezisixhenxe zokukunceda uzive ngathi ungumnini wekhasino, nokuba lixesha lakho lokuqala.
1 – Nxiba Icandelo
Nxiba kakuhle, dlala kakuhle. Ikhowudi yokunxiba kwi-kasinos inokuhluka, kodwa uninzi luvumela abantu abangcakazayo ukuba banxibe naluphi na uhlobo lwempahla ukuba lude luluhle. Ukuqala kwam ukungcakaza, ndaphosa itanki ngaphezulu, iibasketball, neeflip flops. Khawufane ucinge ukujonga endikunayo kwitafile emnyama egcwele abantu abangcakazayo abadala. Ukuba inkangeleko ingabulala.
Anditsho ukuba kufuneka uphosele i-tuxedo nje ukuba uhambe ngokungcakaza, kodwa ayizukunxila into yokunxiba ukuze ubonakale. Isinxibo sam esiqhelekileyo sokuzikhethela sihlala sisibini esihle seebhulukhwe, iibhutsi, kunye nehempe emibala. Le ensemble inika intuthuzelo kunye nesitayile esincinci.
Ukuba uza kuhambo lokungcakaza kwiindawo ezifana neVegas, iAtlantic City, okanye iReno, cinga ngokunxiba, ngakumbi xa uza kudlala kwekhasino emnandi. Ukuba ujonga icandelo, uya kuziva ukhululekile etafileni kwaye uzive ngathi ungowakho.
Eyona mpazamo ixhaphakileyo phakathi kwabadlali abangathathi ntweni kukusilela kwamalungiselelo. Unokucinga ukuba ukudlala izandla ezimbalwa zeblackfowuni kwifowuni yakho xa usiya ekhasinohta kuya kukulungiselela okuzayo. Oku akunakuba kude nenyaniso.
Wonke umdlalo wetheyibhuli unemithetho, imigaqo, kunye ne-etiquette ekufuneka ilandelwe zombini ukuphumelela imali kwaye ungazinikezeli kwabanye abadlali. Ukuba uthatha ixesha lokufunda ngale mithetho, uya kuziva uzithemba ngakumbi kubuchule bakho bokwenza izigqibo kwaye unokwenza uxinzelelo lwakho lube lula.
Eminye yemidlalo efuna ulungiselelo olulinganiselweyo zizilayiti, kwaye ndiqinisekile ukuba ufuna ukuchitha lonke uhambo lwakho lumiswe phambi komatshini. Uninzi lwemidlalo yetafile inemigaqo elula ekufuneka uyilandele, ngelixa icebo linokuba nzima ngakumbi. Imidlalo yetafile yeyona ndawo ichulumancisayo yamava ekhasino kwaye ngokuqinisekileyo lixesha lakho ekuqondeni umdlalo weqonga kunye nokuziphatha.
3-Namathela kuHlahlo-lwabiwo mali lwakho
Abona bantu bahle kakhulu ekungcakazeni baya kuseta isixa sokuba baziva bekhululekile belahlekelwa ngaphambi kokuba baqalise ukungcakaza. Oluhlahlo-lwabiwo mali, olwaziwa ngokuba yibhanki yakho, ayifanelanga ukuba ibe sisixa esithile kodwa akufuneki sikunikeze ukungonwabi xa uphulukene nalo. Ukuhamba uye ekhasino usazi ukuba unokuphulukana ne-bankroll yakho, yinto ekufuneka yenziwe ngumntu wonke ongcakazayo.
Iibhasino zikho ukwenza imali, kwaye uya kuba kwisiphazamiso esincinci kuyo nayiphi na itafile apho ukhetha ukuhlala phantsi. Ukuba izinto zihamba gwenxa kwaye ulahlekile, ukuseta isixa kuya kubonisa ukuba lixesha lokuba uye ekhaya.
Ndiyaziwa ngokundwendwela i-ATM ekhasino emva kokuvuthulula kwi-bankroll yam kwaye mandibe ngowokuqala ukukuxelela, ayizukuhamba kakuhle. Ukudlala ngokubambisa kunye nokujaja ilahleko kukhokelela kwilahleko engakumbi kunye nokudodobala kokuzithemba kwakho kuya phambili.
Nditsho nabagembuli abangcakazayo baye benza ukuhamba kweentloni ukusuka etafileni ukuya kwi-ATM nasemva. Yinxalenye yomdlalo. Kodwa ukuba uqala imikhwa elungileyo kwangethuba, uya kulinga kancinci ukubetha ngaphaya kwesixa sakho esibekiweyo kwaye okunokwenzeka ukhuphe ngaphandle kolawulo.
Zininzi iingcombolo kwindawo ekungcakazayo, kodwa okona kubi kakhulu ngongcakazayo olawula umthengisi. Ndibonile isabelo sam esifanelekileyo samabali ahlekisayo ahleli ecaleni kwetafile emnyama, kwaye uninzi lubandakanya umdlali onolwazelelelo othabatha konke ukukhathazeka kwakhe kumthengisi. Ukuba umtsha kwi-Casinos kwaye awufuni ukuvumela ukuba ube namava, ungaze uyekele umsindo kubathengisi.
Abarhwebi abanakho nakancinane ukulawula iziphumo zawo nawuphi na umdlalo ekhasino, kodwa abanye abongcakazo babona kufanelekile ukuba basole ngobubi babo. Phantse wonke umthengisi endikhe ndadibana naye unobuntu kwaye unobungcali, kodwa kubonakala ngathi ndihlala ndifumana umntu obaphatha nge-zero yeklasi. Abarhwebi bangabasebenzi nje abazama ukuziphilisa kwindawo enomsebenzi efuna ubungakanani bezakhono nobuchule bengqondo.
Ukuba ufuna ukwehla ngonyawo lwasekunene nomthengisi, ekufuneka bonke abo bangcakazayo abatsha banqwenele ukukwenza, qiniseka ukuba ubanikezela ngesisa. Abathengisi benza umvuzo omncinci ngeyure kwaye bafumana uninzi lwemali yabo kwiingcebiso. Ngokucela umthengisi, ubonise uxabiso lwakho ngomsebenzi wabo kunye nokuseka i-rapport, ebaluleke kakhulu kwabo bangcakazayo.
← Uyenza njani iKhuphiswano lweMidlalo yeKhasino kunye neKhuphoni